एनएमबी बैंकको ‘पूर्व स्वीकृत आवास कर्जा’ सुविधा आरम्भ
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले ‘एनएमबी पूर्वस्वीकृति आवास कर्जा’ (एनएमबी प्रिअप्रुभ्ड होम लोन) सुविधा आरम्भ गरेको छ । अब आवास कर्जा प्राप्त गर्न इच्छुक ग्राहकहरूले आफूले किन्न लागेको सम्पत्ति छान्नुपूर्व नै आफ्नो..
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मुनाफाबाट शेयरधनीलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षबाट आधा मात्र लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको..
अच्युत रेग्मी काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै नयाँ तरिकाबाट साइबर अपराध हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर, गुगलजस्ता सञ्जालमा नयाँ खाता खोलेर मानिसले पैसा लुट्ने..
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले आफ्नो आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न सभामा कम्पनीको चुक्ता पूँजी २१.६ करोड रहेकोमा ३८% बोनस शेयर वितरण गरी २९.८..
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले सोमबार प्रदेश नं ४ को तनहहुँ जिल्ला, बन्दीपुर गाँउपालिका वडा नं। २, बन्दीपुरमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बन्दीपुर शाखा सञ्चालनसँगै बैंकको शाखा कार्यालयहरुको संख्या..
एनएमबि बैंकको लगानीकर्तालाई ३५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मुनाफाबाट शेयरधनीलाई आकर्षक लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको कार्तिक २४ गते सम्पन्न बैठकले शेयरधनीलाई ३५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने..
एन आई सी एशिया बैंक र युनियनपेबीच सहकार्यको सुरुवात
काठमाडौं । एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडले युनियनपे इन्टरनेशनलको सहकार्यमा एनआईसी एसिया युनियनपे भर्चुअल कार्डको प्रयोगबाट भुक्तानी गर्ने गरी भुक्तानी प्रणालीको शुरुवात गरेको छ । एन आई सी एशिया बैंकका..
एनआईबिएल युनियनपे कार्ड प्रारम्भ
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र चाईनाको युनियनपे अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको सहकार्यमा एनआईबिएल युनियनपे कार्ड प्रारम्भ हुने भएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे र युनियनपे अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका..
ग्लोबल आईएमई बैंकले ३ महिनामा ४० प्रतिशत बढायो नाफा
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा ७५ करोड ३१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा..
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथी छानबिन गर्न ३ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ । सोमबार गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्र बैंक बोर्ड बैठकले ३ सदस्यीय छानबिन..
सेलपेले बैंक खाता लिंक बापत १०० रुपैंया दिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलकमको सेलपे सेवाले आजबाट स्टल एक्टिभेसन सरु गरेको छ । यो एक्टिभेसन कार्यक्रम सिभिल महलमा कार्तिक ८ गते शुक्रबारका दिन..
सिद्धार्थ बैंकको १८ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको १८ औं वार्षिक साधारण सभा बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैंकका अध्यक्ष मनोज कुमार केडियाको अध्यक्षतामा सभा सम्पन्न भएको हो । साधारण सभाले बैंकको चुक्ता..
काठमाडौं । तपाईं बैंकबाट ऋण लिने तयारीमा हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने तपाईंका लागि खुसीको खबर छ । ऋणको ब्याजदर घटेको छ । बैंकहरुको आधार दर घटेसँगै ऋणको ब्याजदर पनि घटेको..
कीर्तिपुरमा प्राइम बैंकको शाखा खुल्यो
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकले कीर्तिपुर नगरपालिकामा नयाँ शाखा खोली शाखाको शुभारम्भ गरेको छ । यो शाखासँगै बंैकको शाखा संख्या ९६ पुगेको छ । स्थानीय उद्योगी, व्यवशायी, शिक्षक, समाजसेवी तथा विभिन्न..
काठमाडौं । कुमारी बैंक र नेपाल ग्याँस ईन्डष्ट्रीजबीच आय संकलन सुविधा सम्बन्धी सहकार्य भएको छ । कुमारी बैंकका ग्राहकहरूले प्रत्येक नेपाल ग्याँस खरिदको भुक्तानीमा ५० रुपैंया सम्मको क्यासब्याक प्राप्त गर्न..
नेपाल एसबिआई बैंकले लगानीकर्तालाई १६.८४ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १६.८४ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको असोज १२ गते सम्पन्न ४४१ औं बैठकले प्रतिशत ६ बोनस..
काठमाडौं । घटस्थापनाको अवसर पारेर नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडले आफ्ना डेबिड तथा क्रेडिट भिसा कार्डवाहक ग्राहकहरूका लागि सबैभन्दा सुरक्षित र सरल अनलाइन कारोबारका सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आफ्नै पेमेन्ट गेटवे..
काठमाडौं । एनएमबि बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकबीच हिजो शनिबारदेखि एकीकृत कारोवार शुरू भएको छ । दुबै संस्था गाभिए पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ११ अर्ब ५३ करोड र कोष ८ अर्ब..
नेपाल बैंकको सिईओमा कृष्ण अधिकारी नियुक्त, तलब मासिक ३ लाख
काठमाडौं। नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कृष्णबहादुर अधिकारी नियुक्त भएका छन्। शनिबार बसेको बैंक सञ्चालक समिति बैठकले अधिकारीलाई ४ बर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरेको हो। बैंकका डेपुटी सिइओ रहेका अधिकारी..
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एटिएम बुथमा २४ सै घण्टा सुरक्षा गार्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सिस्टम ह्याक गरी रकम निकाल्ने क्रम..
कृषि विकास बैंकका कर्मचारीले अवैध रुपमा चार करोड रुपैयाँ आफ्नो खातामा यसरी सारे
काठमाडौं। कृषि विकास बैंकका लाहानस्थित कर्मचारीले अवैध रुपमा पैसा झिकेर प्रयोग गरेको पाइएको छ। बैंकको आयब्यय विवरणमा रहेको नाफा रकममध्ये ४ करोड रुपैयाँ उनीहरुले आफ्नो र परिवारको विभिन्न खाताहरुमा सारेको..
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट इ-सेवामा लोड गर्न मिल्ने
काठमाडौं । नेपालको पहिलो पेमेन्ट गेटवे इसेवा फोन पे र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच अनलाइन भुक्तानी सम्झौता भएको छ । सम्झौतासँगै अब नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट इसेवामा रकम लोड गर्न तथा विभिन्न..
लोक सेवा आयोगको दरखास्त शुल्क अब एनआईसी एशिया बैंकले बुझ्ने
काठमाडौं । एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड र लोक सेवा आयोगबीच लोक सेवा आयोगबाट संकलन हुने दरखास्त दस्तुर वापतको राजश्व एन आई सी एशिया बैंकमार्फत् संकलन गर्ने सम्झौता भएको..
उन्नति माइक्रोफाइनान्सको पनि ४०.६३ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । उन्नति माइक्रोफाईनान्सले पनि गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मुनाफाबाट आफ्ना शेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। लघुवित्तले कूल ४०.६३ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको हो। असोज १ गते बुधबार..
नेशनल माइक्रोफाइनान्सको लगानीकर्तालाई बम्पर लाभांश घोषणा
काठमाडौं । नेशनल माइक्रोफाइनान्सले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मुनाफाबाट शेयरधनीलाई ८० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ। सञ्चालक समितिको असोज २ गते बिहीबार सम्पन्न बैठकले ७५ प्रतिशत बोनस र बोनसमा..
सिदार्थ बैंकले १० प्रतिशत बोनस तथा १५.२६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । सिदार्थ बैंकले १० प्रतिशत बोनस सेयर तथा १५.२६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । बैंकको संचालक समितिले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस सेयर तथा १५।२६ प्रतिशत..
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एटिएमबाट पैसा नआए सिधै सम्बन्धित बैंकलाई नै सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ। भदौ १४ गते चिनियाँ ह्याकरले नेपालको एटिएम प्रणाली ह्याक गरेर पैसा चोरेपछि नेप्स..
‘निशुल्क बीमा’ नगर्न बीमा समितिको निर्देशन
काठमाडौं । बीमा समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंग निशुल्क बीमा वा सित्तैमा बीमा जस्ता शब्द प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता नगर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ। बिमा समितिले भदौ २३ गते एक..
काठमाडौं । चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले चेकमा गलत हस्ताक्षर गरेमा र खातामा पर्याप्त रकम नभएर (चेक बाउन्स भएमा) एक साताभित्र पनि रकम भुक्तानी नगरे कालोसूचीमा राखिने..
काठमाडौँ । अब २ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा चेक नचाहिने भएको छ । रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट प्रणाली शुरुवात भएपछि २ लाखभन्दा माथिको कारोबारको लागि चेक काट्न नपर्ने भएको हो..
Results 1896: You are at page2of 64